Taariikh nololeedka Marxuum Xil. Boqorre oo kooban – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Taariikh nololeedka Marxuum Xil. Boqorre oo kooban
By Abdihakim Sharif Ali / February 24, 2019 February 24, 2019
Muqdisho -(SONNA)-Marxuum EX. Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre waxaa uu ku dhashay Gobolka Awdal ee Gobolada waqooyi ee Soomaaliya 1939-dii,halkaas oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo,wuxuuna Qur,aanka Kariimka ah uu ku bartay Degmada Boorama iyadoo dugsiga hoose,dhexe iyo sare uu ku qaatay isla Boorama.
Marxuum Boqorre dhalinyaranimadiisii wuxuu ka mid noqday ciidanka Xoogga dalka wuxuuna ka qayb qaatay dagaaladii 1964 iyo 1977dii waxaana labada marba ka soo gaaray dhaawacyo, Allaha unaxariistee marxuumka wuxuu darajada Ciidamada ka gaaray G/Sare, muddo dheer ayuuna ka mid ahaa Ciidanka Xoogga dalka waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii dalka dibaddiisa wax ku soo bartay.
Burburkii dowladdii Soomaaliya kadib, waxaa uu marxuumka ku biiray Siyaasadda sanadkii 2000 ayuu ka mid noqday xildhibaanadii Baarlamaanka ee dowladdii lagu soo dhisay deegaanka Carta ee dalka Jabuuti.
204tii wuxuu noqday Xildhibaan iyo Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka. Marxuum Cismaan Cilmi Boqorre Allaha unaxariistee intii Siyaasadda uu ku jiray wuxuu ka qaybqaatay doorashada Afar Madaxweyne oo uu dalku yeeshay, sanadkii 27 December 2016kii ,waxaa uu marxuum Boqorre noqday Xildhibaanka ugu da,da weynaa Golaha Shacbiga sidaa darteedna waxaa loo doortay in uu Gudoomiyo Baarlamaanka inta guddoomiye rasmi ah laga dooranayay.
Dhanka kale Marxuum Boqorre wuxuu ahaa Xildhibaan afkaartiisa siyaasadeed si qeexan fagaarayaasha ugu soo bandhiga isagoo ka jeedin jiray kal-fadiyada Baarlamanka ay yeeshaan. sanadkii hore ee 2018kii hadal uu Golaha Shacbiga hortiisa ka jeediyay waxuu kaga hadlay amaanka Muqdisho, isagoo Xildhibaanada,wasiirada iyo Saraakiisha kale ee dowladda u soo jeediyay in ay cabsida iska daayaan oo ay degmooyinka kala duwan ee Muqdisho ay dagaan si ay bulshada ay matalaan uga war hayaan.
Marxuumka wuxuu hadda ka mid ahaa Gudiga difaaca ee Baarlanka, wuxuuna ahaa shaqsi mar walba u dooda daryeelka ciidamada, wuxuuna hoosta ka xariiqi jiray in haddii ciidamada dalka ay helaan daryeel buuxa iyo ka war hayn joogta ah, in amniga dalka uu horumar ku tallaabsanayo.
Marxuum Cismaan Cilmi Boqorre dadka ay isla soo shaqeeyeen waxay ku sifeeyeen in uu ahaa shaqsi aad ugu dadaala Cibaadada Alle, aad u naxariis badan qunyar socod, samirbadan, wuxuuna ifka kaga tagay xaas iyo Caruur isugu jira wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen.